Amal Khamis Abameli Nabameli | Izinkampani Zomthetho eDubai
Amal Khamis nabameli
Uhlu lwabalandeli be-Amal Khamis, Ababonisi bezomthetho nabameli
I-Amal Khamis Advocates kanye nabeluleki bezomthetho bayinkampani yezomthetho ehlonishwa umhlaba wonke ye-UAE enerekhodi elide lokugqama nobuholi obuhle eDubai, e-UAE. Sineminyaka engaphezu kwengu-50 yokuhlangenwe nakho okuqongelelayo.
Abameli be-Amal Khamis kanye nababonisi bezomthetho banikeza amaklayenti izinsizakalo zomthetho ezigxile kumakhasimende nezindleko ezingena emakhokheni amakhulu omthetho webhizinisi. I-firm yethu iyaziqhenya ngendlela yethu yokulalela nokuzikhethela kuwo wonke amaklayenti. Sisebenza eduze namakhasimende ethu ukuthola nokusebenzisa izixazululo ezisemthethweni ezihambisana nezidingo zabo. Abameli be-Amal Khamis kanye nababonisi bezomthetho basingatha ukuthengiselana kwezomnotho kanye nokuphikisana ngokuzinikezela nokuqina okufanayo ukuthi ikhasimende lethu liyi-Fortune 500 inkampani noma ibhizinisi elincane eligcinwe ngasese.
Amalungu ehhovisi lethu: -
Ihhovisi lethu liyaziqhenya kakhulu ngezinto ezihlukahlukene ezivezwe emalungwini ethu ehhovisi:
UNkk Advocate: U-Amal Khamis - u-UAE kazwelonke
UNkk Advocate: U-Amal Khamis - Uzwelonke we-UAE- Ummeli nomxhumanisi wezomthetho. ungumsunguli wehhovisi lika-Amal Khamis Abagqugquzeli Nezomthetho. Ungumfundi we-Shariah noMthetho (LLB) - University of UAE.
U-Amal Khamis ungummeli omkhulu ku-Amal Khamis Advocates kanye ne-Legal Consultants Law Firm. Unolwazi olukhulu olubhekele ezentengiso kwezomthetho, umthetho wezabasebenzi, umthetho wezokwakha, umthetho wezindaba, izingxabano zebhizinisi.
Uye wabandakanyeka ekuthengisweni kwebhizinisi eliphezulu kanye nezinkinga zokuxazulula izingxabano. Usebenza namakhasimende ethu ukuxazulula inqwaba yezindaba zezohwebo ezibhekene nemisebenzi yamabhizinisi ethu nsuku zonke.
Uphethe zonke izici zecala elivela kumshuwalense kanye nezinkinga ezimbi zokukholwa nakwezinye izindawo ezifana nokuzibophezela kwezobuchwepheshe, ukulimala kwempahla, nokuguqulwa. Futhi unolwazi oluningi ezinhlobonhlobo zezindlu zangempela kanye nokuthengiselana kwebhizinisi kanye nokuphikisana, okubandakanya ukwakheka, ukuthenga nokuthengisa, ukuxhasa ngezimali nokuqashisa.
UMnu Alaa Jaber Muhammad Al Hoshy
Mnu. Alaa Jaber Muhammad Al Hoshy - uthweswe iziqu e-Faculty of Law (LLB), wase-Alexandria University; Ngaphambi kokusungulwa kweFirm Amal Khamis, wayesebenzela inkampani yezomthetho e-UAE e-'Hashim Al Jamal abameli nabaluleki bezomthetho 'njengomeluleki wabo wezomthetho kanye noMeluleki Wezomthetho Wangaphakathi.
Okuhlangenwe nakho kwakhe kwangaphambili kweminyaka ye-15 njengoba umeluleki wezomthetho izinkampani zomtshali-zimali kanye nezinkontileka ezihambisana nesizinda sakhe semfundo esemthethweni kumenza akwazi ukuqonda ngokujulile ukukhathazeka kwamaklayenti akhe futhi abeluleka ngokunikezwa ngokuphumelelayo kwezingozi ezifanele zamabhizinisi abo ngokufanele.
Kuwo wonke umsebenzi wakhe wobuchwepheshe, uMnu. Alaa uye waxwayisa izinkampani eziningana nezangaphandle futhi wabamba ububanzi obubanzi bezindaba ezinkampani, ezentengiselwano nezokulawula emhlabeni wonke nakwezinye izindawo eziphathelene nezici ezihlukahlukene zoMthetho we-UAE kubandakanya ama-consortiums kanye nokuhlanganyela okuhlangene; ukuhlela izivumelwano zokuthenga ngokuhlanganyela, izivumelwano zabanikazi bamasheya, amalungiselelo okuqinisekisa, izivumelwano zokuthuthukiswa komsebenzi, ukuhlinzeka izeluleko zomthetho ngokuthengiselana kwezinkampani, umthetho wokuncintisana, imali yephrojekthi, izimvume, umthetho wezokwelapha, umthetho wezamandla kanye nezindaba zokulawula, amathenda omphakathi, umthetho wokwakha, amaphrojekthi e-EPC , umthetho wezabasebenzi, umthetho wentela kanye nokutshalwa kwemali kwamanye amazwe.
UMnu Alaa usebenza ezindaweni zomshuwalense, umnotho, nomthetho webhizinisi kanye nezokuhweba, ngokugcizelela ekubhekiseni umshuwalense, ukuthethwa kwezomthetho, ukuthengwa kwezindlu kanye nokuhwebelana kwebhizinisi.
UMnu Salam Al Jabri
UMnu Salam Al Jabri - ummeli owazi kahle futhi ochwepheshe, esebenza e-United Arab Emirates kusukela ngo-2006 kuze kube manje.
Uphethe zonke izici zokwahlulela kuzo zonke izinkantolo zase-UAE, kufaka phakathi izingxabano zezebhizinisi nezomabhizinisi, ukuphikisana, ukuthunyelwa, ukuphikisana, ukuxazululwa, izingqungquthela zokuhlala.
Usize emsebenzini wokulungiswa kwezilingo eziningana ezindabeni eziphathelene nokuphikisana komphakathi futhi uhlele futhi uphikisana nezindaba eziningana zokuphumelela komthetho nezinyathelo zokunyakaza, kufaka phakathi izinkulumo zokuqeda nokugwetshwa isinqumo, okuholela ekuxazululeni okuphumelelayo nokuxazululwa kahle.
Ukucebisa abathuthukisi bempahla ngokuphathelene nokusetshenziswa komhlaba okubandakanya ukulungiswa kwezivumelwano ezinqunyelwe ukuhlukanisa, ukuqashisa, amalayisense, ama-easements, izivumelwano zokuvimbela, kanye nezitatimende zokuphatha. Ukuhambisa amaphepha omthetho emisebenzini nakumakhasimende ngemibandela yezinkontileka kuhlanganise nomsebenzi wokuba nokholo ngokuvumelana nezinkontileka zezinkontileka, ngokuphathelene nemithetho yezivumelwano ezingekho emthethweni, ezindabeni eziphathelene nokuphoqelelwa kwezinkontileka zokuthengisa umhlaba, kwi-leasing land land, ku-Corruption and Crime Umthetho weKhomishini
UMnu Sayed Muhammad Abdul Aziz
UMnu. Sayed Muhammad Abdul Aziz - ummeli kazwelonke kanye nomeluleki wezomthetho- iziqu ze-Faculty of Law - usebenze e-United Arab Emirates iminyaka eyi-15 nase-India iminyaka eyi-14 kuzo zonke izinhlobo zamacala.
Ukuhlinzeka ngezeluleko mayelana nokuphathwa kwamangalo kanye necebo, i-quantum, i-litigation, ukukhokhelwa kwezivumelwano, ukuxazulula izingxabano, ukutholakala komthetho ovamile kanye nokwenyuka kwemali, ukulingana nokubuyiswa. Ukucebisa ngezinhlobonhlobo zezindaba eziphathelene nomshuwalense, ngokuyinhloko ezindaweni zokukhokhelwa kwabasebenzi / izibonelelo zokuqashwa. Imithetho ejwayelekile yomthetho ehilela abaqashi nabesithathu. Amacala Okudabuka Kwezokwelapha, Ingozi yemoto, inkokhelo yomphakathi, ingozi yendiza, kanye nezinye izimangalo zomthetho ezivamile.
Izindawo zakhe eziyinhloko zobuchwepheshe zihlanganisa Ukuqedwa komsebenzi (ukuxoshwa okungekho emthethweni, ukuvikelwa okuvamile, ukuphikisana kwezicelo zenkontileka), izingxoxo ezihamba phambili ze-Bargaining negotiations, Ukuphathwa kokusebenza, kanye ne-HR Business Partnering, umthetho we-Strategic IR nomthetho wokuqashwa, Ukuphathwa kwezingxabano zezimboni, ukuguqulwa komsebenzi kanye nenhlangano ukulungiswa kabusha nokusebenza kwezempilo nokuphepha.
Futhi maduze nje, izici zomthetho zokuphepha kwe-intanethi, kuhlanganise nokuphatha ukuhlonishwa komuntu siqu ngaphansi kwemithetho emisha yokubika imininingwane yokuphula umthetho nemithetho yobugebengu.
UNksz Mona Ahmad Fawzy
UNkk Mona Ahmad Fawzy - Unolwazi lweminyaka engaphezu kwengu-10 ezindaweni ezahlukahlukene zomthetho ezibandakanya ukumangalelwa ngezigaba, amacala okuhlukunyezwa kwabantu abaningi, umthetho wezezakhiwo, izahlulelo kanye nokuqoqwa eDubai nase-UAE, umthetho wezokwakha, amacala ezamabhizinisi, umthetho womndeni , kanye namacala avamile omphakathi. Ubambe iqhaza elibonakalayo ekuphathweni kweHhovisi, imicimbi yangaphakathi. Uphinde abe yiMenenja yezokuXhumana noMphakathi ehhovisi.
Uthole ulwazi ku: Izindlu Zokuhlala, Indawo Yokuhweba; Ukuhlaliswa kwamabhizinisi; Izicelo Zokulayisensa Utshwala; Ukulungiswa kwemibhalo yezokuphepha kwababolekisi besigaba sesibili nabesithathu nabazimele; kanye Nokusiza ekulungisweni kwamaWills & Probate kanye neRetail Leases.
Ubuye abe nokuziphatha kwezinhlobonhlobo zezindaba zokuCubungula kanye nezokuBhankana nezeZimali ekukhonjisweni kwethu, Ukuboleka kanye namakhasimende womzimba wezomthetho kuhlanganise - Zonke izinhlobo zeziqephu; Izenzo Zokuqala; Ama-Easter nama-Surrenders of Easement; Ukuguqulwa Kwemigomo Yokulima Imali; Ukudluliswa komhlaba phakathi kwamaqembu ahlobene;
UMnu Raj Jain
UMnu. Raj Jain - Umxhumanisi wezomthetho- Uhileleke ngokugcwele kuzo zonke izici zokusekela amacala, kufaka phakathi ukubhala phansi nokubhala, ukubamba ukubuyekezwa kwedokhumenti nokusebenzisana namakhasimende, abameli, ochwepheshe, abasebenzi bezinkantolo kanye nezinhlangano zokuphatha.
Uneminyaka engaphezulu kwe-7 yobufakazi njengomxhumanisi wezomthetho onokuhlangenwe nakho okubanzi kokwaziswa komshuwalense wokuqala nowesithathu, ukushayisana, ukwakhiwa, umthetho wezindlu zangempela, umthetho womndeni, ukulimala komuntu siqu, umthetho wezobugebengu, webhizinisi kanye neyenkampani.
Izindawo zakhe eziyinhloko zokuzibandakanya zibandakanya: Ukungeniswa kwebhizinisi kanye nokwaziswa komuntu siqu; Ukutakula izikweletu;
Izingxabano zenkontileka; Ukushushiswa ngokomthetho; Izingxabano zama-wills, amafa kanye nama-trust; Umthetho ojwayelekile amacala okulimala komuntu;
UMnu Ahmed Mohamed
UMnu Ahmed Mohamed - Ungomunye wabameli bethu abaphezulu, osebenza e-United Arab Emirates kusukela ngo-2007 kuze kube manje.
Uhlinzeka iseluleko kuzo zonke izici zobudlelwano bokuqashwa kwamakhasimende azo zonke izilinganiso futhi unolwazi kuwo wonke amabhizinisi avela ukuxazulula izimpikiswano zezebhizinisi, ukwakhiwa, ukumbiwa kwemayini, i-oli negesi, ukukhiqiza, imfundo nokudayisa.
Okuhlangenwe nakho kwakhe kuhlanganisa: Izindaba zebhizinisi kanye nezentengiselwano, kufaka phakathi izindaba eziphathelene nokuthengwa nokuthengisa, izivumelwano zabanikazi, izinkontileka ezijwayelekile zokuhweba kanye nezindawo zokuhlala. Izindaba zokuhlela izindawo, kufaka phakathi izinhloso, amandla okugcina ommeli, amandla okugcina okugcina nokuqondisa ezempilo. Izindaba zokuphatha izindlu ngokuphathelene nezindawo ezifihliwe (egameni lezinkampani ngabanye kanye ne-trustee).
Izindaba ezihlobene nezakhiwo ezibandakanya ukuqashiswa, ukuthengwa kwempahla, ukulahla, iziphazamiso kanye nezindawo zokuhlala.
UMnu Ihab Al Nuzahi
UMnu. Ihab Al Nuzahi Ungummeli oqeqeshiwe futhi onolwazi, esebenza e-United Arab Emirates kusukela ngo-2013 kuze kube manje.
Ukubhekisana nezimpikiswano eziningi zezimboni, izicelo zokuvikelwa okujwayelekile kanye nokuphulwa kwezinkontileka ezindabeni zezohwebo nezase-UAE. Umelela izinkampani ze-trustee, izikhungo zezezimali, abaphathiswa, abaphathi kanye nabantu ngabanye ngokunikeza izeluleko nokwenza ngokuphathelene nokuhlala kwempahla, izindaba zokuphepha nokuphathwa kwefa.
UMnu Alaa Sayed Abbas
UMnu Alaa Sayed Abbas - Ummeli ochwepheshe kakhulu, osebenza e-United Arab Emirates kusukela ngo-2013 kuze kube manje.
Uye waxwayisa izinkampani ezizimele kanye nezomphakathi ngokuphathelene nezivumelwano zentengiso kuhlanganise nezivumelwano zokwakha, izinkontileka zokunikezwa kwezimpahla nezinsizakalo, izivumelwano zokuthengisa umhlaba, izivumelwano zokuphatha, ukukhokhelwa kwemali, ukugcinwa kwemali, amandla ommeli kanye nezivumelwano zokulayisensi.
Mnu. Al Gendi Ahmed Al Gendi - Ummeli onolwazi nodumile e-UAE. Isazi sezingxabano zebhizinisi nezokuhweba, ukuthengiselana ngebhizinisi, amacala ezezimali, ukuhlanganiswa nokutholwa.
Ukuhlelwa kabusha nokucebisa ngokuqashisa, amalayisense, ama-easements, izinkontileka zokuthuthukiswa komhlaba, kanye nezivumelwano zokuxhaswa komthuthukisi. Ukulungiselela nokweluleka ngezinkontileka zokuthengiswa nokuthengwa kwezakhiwo, amabhizinisi nezinkampani.
Unolwazi olujulile ezindaweni zokuhlela impahla, ezezimali kanye nempahla. Usebenza kubalimi, abakhiqizi bempahla, ama-real estate agent, ama-accountants kanye nezinkampani zamatrasti.
UMnu Khaled Elnakib
UMnu. Khaled Elnakib - ummeli ochwepheshe kakhulu, esebenza e-United Arab Emirates kusukela ngo-2007 kuze kube manje.
Unesipiliyoni somhlangano wezomthetho nomqashi ophezulu. Umkhuba wakhe ugxile emibangweni yomphakathi ezindaweni zokuphikisana kwezentengiselwano nezomabhizinisi, izindlu zangasese, umthetho wokwakha, kanye nomsebenzi wemfanelo. Ukwazi zonke izici zamacala nezinkantolo zenkantolo yase-UAE, kufaka phakathi ukuhlaziywa kwezikhalazo, ukutholakala, ukuxazulula ukuphikisana okuhlukile, ukulungiswa kwesilingo, nokuhlolwa.
Uphinde wamela amaklayenti amacala ekuxazululeni izimpikiswano ngokusebenzisa izingqungquthela zokuzithandela kanye nezinkomfa ezinqunyelwe ukuhlala ezinkantolo. Uletha naye eminyakeni eyi-10 yokuhlangenwe nakho kwamacala ebhizinisi, ukuvikela umshwalense, ukuhlukumezeka komthetho kanye nokubhekwa kwezidakamizwa nezidakamizwa.
UNksz Nourhan Mohamed Adawy
UNksz Nourhan Mohamed Adawy - Ukuba nomlando wezomthetho kanye nokuhlangenwe nakho nokusebenza ekomitini yethu e-Dubai kusukela ku-2015 kuze kube manje.
Ochwepheshe kakhulu futhi abanolwazi emthethweni wokwakha, amacala ebhizinisi, umthetho womndeni, kanye nokuphikisana komphakathi jikelele. Usize emsebenzini wokulungisa izilingo eziningana ezindabeni ezibhekene nezikhalazo zomphakathi futhi uhlezi futhi wafakazela izinqumo eziningana zokuphumelela komthetho nezinyathelo zokunyakaza, kufaka phakathi izinkulumo zokuqeda nokugweba isahlulelo, okuholela ekuxazululeni okuphumelelayo nokuxazululwa kahle.
Uhlanganyele ngokugcwele kuzo zonke izici zokusekela amacala, kufaka phakathi ukubhala phansi nokubhala, ukubamba ukubuyekezwa kwedokhumenti, ucwaningo lwezomthetho, nokusebenzisana namakhasimende, abameli, izazi, abasebenzi bekhotho, kanye nama-ejensi okuphatha omthetho.